Ingebhe kubazali ngezingane ezidukile | Ilanga News
Home Izindaba Ingebhe kubazali ngezingane ezidukile
Ingebhe kubazali ngezingane ezidukile
Kuthiwa kutholakale izidakamizwa emchameni wezibuyile
BANOVALO abanye abazali bezingane eziwu-32 zaseMthwalume okusolwa ukuthi zithunjwe mhla ka-2 kuMasingana (January), eziwu-17 zagcina zilandiwe mhla ka-5 kwephezulu, kodwa ezinye kazikatholakali namanje.
Okuqubula ingebhe wukuthi kakwaziwa noma lezi ezibuyile zike zadlwengulwa yini nokuthi lezi ezingakabuyi zisayophinde zitholakale yini.
Kuthiwa lezi zingane eziyiqembu lomdanso zinyamalala nje, bezihlangane kwathiwa ziya emcimbini obekulindeleke ukuba ube sendaweni, kodwa wagcina ususesigcemeni sakwa-K, eMlazi – okuyibanga elilinganiselwa ku-77km ukusuka eMthwalume.
Lo mcimbi bekungowokujabulela ukunqoba kwale ntsha emqhudelwaneni womdanso.
Ngokuthola kweLANGA ngemithombo eyahlukene, abazali balezi zingane, ezinye ezineminyaka elinganiselwa ku-14 ubudala, bebeshayana ngamakhanda, bengena bephuma esiteshini samaphoyisa eHibberdene, beyobika izingane zabo ezilahlekile.
Ngokuthola kweLANGA, indaba iqale ngesikhathi kusahlelwa lo mcimbi kanti kuzoqhamuka owesilisa wasendaweni ongusicabha, wathi leli qembu lomdanso maliye kuyena nenye intsha, uzowenza yena umcimbi, uzothenga utshwala nazo zonke izinto ezehla kahle uma kwenziwe idili.
Kuthiwa iqoqene le ntsha, yagcina seyiwu-32. Kuthe uma ifika lapho bekumele kuhlanganelwe khona, yatshelwa ukuthi umcimbi ususolwandle eMfazaza-ne, khona eMthwalume. Nokho kugcine kungenzekanga lokho njengoba kuthiwa umshayeli uyibhule yaze yayobhajwa eMlazi, emuva kokuba laba bathandi bobumnandi sebetshelwe ukuthi sekushintshe izinhlelo kodwa bazobuya ebusuku bangabo umhla ka-2.
ILANGA likhulume nabazali abawu-5 abanezingane ebeziye kulo mcimbi okusolwa ukuthi zi-gxishwe izidakamizwa kuwona. Yize abazali bezwakala bezilahla izingane zabo ngecala lokuqoqana zize zihambe, kodwa bakhona abathi izingane zabo bezihleli kahle lapho bezikhona, bezingatholakali nje yingoba omakhalekhukhwini bazo bezibabeke ndawonye ngoba indawo yokubachatha (charge) be-yiyinye, zakhetha ukuvele zingabachathi.
Abazali abacele ukungadalulwa ngoba bevikela izingane zabo, bekhuluma neLANGA ngoLwesibili, omunye ubesesibhedlela enge-niswe ngemuva kokunyamalala kwendodakazi yakhe eneminyaka ewu-14 ubudala.
“Ngethuka ngokweqile ngemuva kokuzwa ukuthi izingane zinyamalele. Njengabazali sasingazi lutho ngale phathi eyayihleliwe, sabona selishonile ilanga sekuyolalwa ukuthi kazibuyi. Sasizitshela ukuthi zikomakhelwane. Saze sazama imoto salibhekisa kulowo Mlazi lapho safike saxhumana namaphoyisa aseBhekithemba ukuba asilekelele siyofuna izingane.
“Kweziwu-32, sikwazile ukuthola eziwu-15, okuyizo ebesezilanda ukuthi kwenzekeni. Zithi beziphucwe omakhalekhukhwini, zingenakho nokudla, beziphila ngokudla okwakusale ngemuva kwephathi,” kusho lo mzali wesifazane osesibhedlela. Owesilisa, naye ocele ukuba igama lakhe ligodlwe ngoba ethi uvikela izingane zakhe, uthe yena usadidekile.
“Ngisadidekile namanje ukuthi kwenzekeni. Kuyimanje nje sisesibhedlela, silethe izingane ngoba kasazi noma bazinukubezile yini, kodwa osekuvelile emchameni wukuthi zikhona izidakamizwa ezinikezwe zona, okubalwa kuzona nensangu,” kusho yena.
Uthi ezinganeni zakhe bekukhona eneminyaka ewu-19, enewu-17 nengane kadadewabo ebivakashile eneminyaka ewu-15.
“Ezami uma zilanda zithi zifakwe kwiQuantum eyodwa zonke, zampintshana khona kuthiwa kuyiwa olwandle eMfazazane. Kube sekushintsha uhlelo seziphakathi emotweni, kwathiwa kuyiwa eMlazi. Izingane zethu ngezasemakhaya, ngiyacabanga ukuthi ezinye zijabulele nje ukuthi kuyiwa elokishini. Konke lokhu zithi bekuhle-lwe ngumfana wasendaweni oku-thiwa nguKhetho,” kusho yena.
Uthi waya emaphoyiseni aseHibberdene ngawo umhla ka-2, wafike wathola ukuthi akayedwa kule nkiyankiya.
“Besithi uma sizifonela izingane, izingcingo zingabanjwa, kodwa ekhona lona ophendulayo kuWhatsApp uma uthumelela umyalezo, kodwa engafuni ukusho ukuthi izingane zikuphi. Ngiyakholwa wukuthi umhleli wale phathi nomshayeli wetekisi babenezinhloso zabo nje ngoba kuyabonakala ukuthi izingane lezi kukhulu ababefuna ukuzenza khona,” kusho yena.
Uthi ngesikhathi bezilanda ngomhla ka-5, kwase kukhona owakwamakhelwane walapho ezazigcinwe khona, okunguyena owazivulela, zagcina sezihamba nje zingazi ukuthi ziyaphi.
Ngokuthola kwe-LANGA, kulezi eziwu-15 ebezisasele, zibuyile ezimbili ngoLwesibili, kodwa akucaci ukuthi zithi bezikuphi sonke lesi sikhathi.
Omunye wabazali usole umshayeli okwakumele alande izingane ngemuva kwephathi, kodwa wangazilanda.
“Eyami ingane kayinalutho futhi nalokhu kotshwala nezidakamizwa ithe kakulona iqiniso. Ithe bebenakho ukudla okwakusale ngemuva kwephathi, ngakhoke kangiyazi eyalaba bazali asebekhuluma izinto eziningi kangaka ezingekho,” kusho lo mzali ngokucasuka.
UCapt Nqobile Gwala, okhulumela amaphoyisa, uthe kaba-nalo lolu daba emishinini yabo – okuchaza ukuthi kalikho icala elivuliwe mayelana nalo.
Previous articleUmndeni uyaveva ngelungu elifile
Next articleUsekubhaceni “obulale” inyanga